Antony 4 Maninona Isika no Tian'i Salsa | Fred Astaire
Antony 4 antony itiavantsika an'i Salsa
Fahavaratra izao, ary ny fahavaratra no mitondra ny hafanana. Toy izany koa ny iray amin'ireo dihy ankafizinay - salsa ohatra. Mafana, mafana, mafana. Salsa dia mitombo hatrany amin'ny lazany noho ny fandehany haingana sy ny mozika mivantana izay miaraka amin'ity dihy any Karaiba ity.
Ny dihy latina dia miorina amin'ny crescendo, miteraka fihenjanana sy famotsorana. Izany no mahatonga an'i salsa ho dihy mahafinaritra ho an'ny mpiara-miasa, iray tena ara-tsosialy ary tianay hampianarina ao amin'ny Fred Astaire Dance Studios. Mampianatra mpianatra salsa izahay manomboka amin'ny vao manomboka ka hatramin'ny manam-pahaizana, miaraka amina fampianarana manokana sy kilasy vondrona misy hatrany ary manao fety voaomana tsy tapaka.
Manoro hevitra izahay salsa ohatra noho ny antony maro:
Salsa mahafinaritra! Ity dihy velona ity, miaraka amin'ny faka Afro-Kioban, dia mafana fo ary mampifanakaiky ireo mpandihy. Misy fifaliana iraisana amin'ny fanatanterahana ny dian-tongotra sy ny mahazatra ary ny fomba mahazatra izay mety hahatratra tampon'ny tazo. Afaka manatsara ny fiainam-piarahamoninao izany satria mila mpiara-miasa ny mpandihy ary ny mpandihy dia afaka miara-miasa amin'ny fianarana sy salsa fandihizana. Te hihaona amin'ny olona vaovao sy manaitaitra bebe kokoa ve ianao? Salsa dia fomba iray.
Salsa dia manampy anao hanana endrika ary hitazonana endrika. Ny dihy salsa adiny iray dia mirehitra na aiza na aiza misy kalôria 400-500. Tsy aleonao ve mandihy toy izay eo amin'ny fitoeran-tongotra ao amin'ny gym? Noheverinay izany. Miaraka amin'ny fampihetseham-batana toy izao dia tonga ny fihenan-danja sy ny fikafika kardio tsara kokoa. Ny fandihizana koa dia famoronana famoronana sy fanentanana ara-tsaina.
Salsa dia tsy maintsy mandray mihoatra ny amin'ny dihy. Noho ny fakany dia mampiharihary ny mpandihy ny kolontsaina sy ny mozika amerikanina latina ny salsa. Izy io koa dia dihy izay fantatry ny iraisam-pirenena ary azo atao na aiza na aiza. Mety tsy hitovy amin'ny fomba amam-bika izany any amin'ny toerana maro samihafa - Ny sehatry ny salsa any New York dia nisy fiantraikany bebe kokoa tao Puerto Rican, raha ny Florida kosa mijanona ho miorim-paka kokoa any Kiobà - fa ny salsa aficionado kosa afaka mandihy hatraiza hatraiza.
Manokatra varavarana ho an'ny dihy hafa i Salsa. Betsaka amin'ireo mianatra salsa no efa mahalala ny mambo ary manana fanandramana amin'ny dihy latina. Fa ho an'ireo izay mandray salsa ho fanampin'ny fanazaran-dihin'izy ireo amin'ny dihim-pandihizana dia mety hahita làlana misimisy kokoa - bachata, merengue, tango, cha-cha - izay manintona sy mahafinaritra ihany koa. Salsa dia mety ho vavahadinao amin'ireo dihy mahafinaritra ireo.
Mifandraisa amin'i Fred Astaire Dance Studio raha mila fampahalalana momba ny kilasy salsa tsy miankina na kilasy salsa vondrona na karazana dihy fandihizana. Andao handihy miaraka aminay, fantatray fa hahafaly anao izany.